फिल्म ‘पुष्पाः द राइज’ सुपरहिट भएपछि नायिका रश्मिकाले देखाउन थालिन् पारा ?
फिल्म ‘पुष्पाः द राइज’ सुपरहिट भएपछि नायिका रश्मिकाले देखाउन थालिन् पारा ? के घमण्डी बनेकी हुन् रश्मिका
काठमाडौं, २६ पुस । अभिनेता अल्लू अर्जुन र अभिनेत्री रश्मिका मन्दानाको फिल्म ‘पुष्पाः द राइज’ सुपरहिट फिल्म साबित भइसकेको छ । फिल्मले बक्स अफिसमा पैसा संकलनको काम जारी राखेको छ । पेन इन्डियाको फिल्मलाई भारतभर रुचाइएको छ ।